I-China i-Promotional Lixabiso eyi-12oz ye-ecological emnyama ye-Canvas yokuthenga ibhegi yomvelisi kunye noMthengisi | Zhihongda
Ingxowa yeT-Shirt engalukwanga
Ihowuliseyili Shicilela Elungiselelweyo ILogo China Advertising ...
Iibhola ze-Alimentos Zipper eziMhlophe eziPholileyo zeNgxowa ze-Ins ...
Iibolsas zeRegalo eziMde zokuPhatha iGrocery Bag Coloured Co ...
Ingxowa yeNtengiso yeShishini yoShicilelo engalukiweyo yeTote Shopping Bag
Custom uziphu enamavili Non womluki Suit Ilaphu ...
Uziphu Pink Blue Nonwoven Thermal Ingxowa Thatha Out Seafo ...
Ihowuliseyili ibhegi ibhegi ipokotho yefashoni yomqhaphu umtya b ...
Elungiselelweyo Umbala Friendly Eco Black Joint Zitsala ...
Elungiselelweyo Custom kwizinga eliphezulu Imfono umqhaphu canv ...
Umtya webhegi yokuhombisa umbala wendalo ungenanto ...
Eco-Friendly ukuba umtya Bag Cotton Gift Bag Drawstri ...
Kwenziwe ngentando ibhegi yomtya yokuGcina isipho sendalo ...
Isebenza kwakhona ivenkile yokuthenga e-organic i-100% ...
12oz Heavy Duty Eco Travel Bags Ngaphakathi Brand Label G ...
Lixabiso 100% Cotton ngelaphu Shopping Tote Bag kunye Guss ...
Custom logo ezinkulu iingxowa ngebhegi lokuthenga tote nge r ...
Ukuthenga i-eco-friendly i-100% yomqhaphu we-tovas tot ...
ILogo -Printa i-organic Organic Cotton Canvas Ilaphu engenanto Tote B ...
Intengiso yexabiso eliphantsi le-12oz ye-ecological emnyama yelinen yokuthenga ibhegi
1. UKUSEBENZA KAKHULU: Ezi ngxowa zinomthwalo omkhulu kwaye ziya kugcina ukutya okuninzi, zisongela ixesha nemali. Ubukhulu esingabizi yamkelekile
2. UMSEBENZI OBUNZIMA: Imitya ithungwe yonke indlela ezantsi ngaphambili nangasemva ukuze yomelele ngakumbi xa ithwele izinto ezinzima okanye njengomgangatho. Ngaphezulu kwemigca yobude begxalaba yenza ukuthwala izinto zakho kube lula,
3.YILA IZINTO ZOKUQHELEKILEYO: Ilungele ukuhombisa okanye ukupeyinta uyilo lwakho kuyo.
UKUSETYENZISWA KWE-MULTI: Ezi ngxowa zilungele ukutya, elunxwemeni, iphuli, ipikniki, uhambo okanye nje ngetoti yemihla ngemihla.
I-5.I-BODEGRADABLE: Ezi ngxowa zinokuboliswa ziintsholongwane kwaye yinto ebalaseleyo yokulahla iingxowa zeplastiki.
Igama lomxholo Intengiso yexabiso eliphantsi le-12oz ye-ecological emnyama yelinen yokuthenga ibhegi
Ukusetyenziswa Ukuthenga, ukuPhakanyiswa kwesipho, ukuPakisha, ingubo yelaphu, njl.
Izinto eziphathekayo Iicotton canvas 100% umqhaphu, 4-20oz, 100gsm-570gsm, 6oz (175gsm), 8oz (230gsm), 10oz (280gsm), 12oz (340gsm)
Ubungakanani 10x15cm, 15x21cm, 20x25cm 25x30m 30x35cm 35x40cm okanye ubungakanani ngokwezifiso.
Umbala Umbala Natural, Mhlophe, Mnyama okanye wena ngokwesicelo sakho.
Ukuvalwa Intambo yomqhaphu, intambo ejijekileyo, njl.
Iimilo tyaba, ezantsi isikwere, ezantsi ngeenxa zonke, ezantsi isikwere kunye gusset
LOGO Logo ngentando
I-OEM kunye ne-ODM Ewe, siyayamkela!
Iyashicilela ushicilelo lwesilika lesilika, ifoyile yebronzing kunye noshicilelo lokuhambisa ubushushu, ushicilelo sublimation Thermal, Printing Digital, njl
Ixesha lokuvelisa Iintsuku 15-25, ngokwenani lakho.
Ukupakisha Iifayile ezingama-200 / ibhokisi, okanye ngokwemfuneko yabathengi
Indlela yokuhambisa elwandle, ngomoya, ngokubonisa
Isampulu 1). ixesha isampuli: Kwiintsuku 3-5.
2). Intlawulo yesampulu: Ngokweenkcukacha zemveliso.
3). Ukubuyiselwa kwesampulu: ewe xa ubuninzi bukhulu
4). Ukuhanjiswa kwesampulu: UPS, FedEx, DHL,
5). Isampulu yethu yesitokhwe simahla, kodwa kuya kufuneka uhlawule isampulu yokuhanjiswa kwempahla
Ixesha lokuhlawula 30% idipozithi ngu T / T kwangaphambili, 70% eseleyo yi T / T phambi zimpahla
L / C, D / A, D / P, Western Union, Paypal, Visa, Card Debit, ikhadi lamatyala
FOB izibuko Chengdu okanye eShanghai.
Ukuprinta kweSilkscreen: sebenzisa kuyilo oluqukethe imibala embalwa.
UkuPrinta ukuDlulisa uBushushu: sebenzisa kuyilo olugubungela encinci kwaye inemibala emininzi.
Ukuprinta kwidijithali: sebenzisa kuyilo olugubungela olukhulu kwaye lunemibala emininzi.
Nceda usixelele imfuno yakho yoshicilelo okanye usithumelele umzobo wakho wobugcisa, siya kuncoma eyona ndlela ifanelekileyo yokuprinta kuwe.
Ngokwesiqhelo, Sisebenzisa i-6oz (175gsm), 8oz (230gsm), 10oz (280gsm), 12oz (340gsm) izinto ukwenza ibhegi yekotoni ye-canvas. Ungakhetha ezinye izinto ubukhulu njengoko ufuna. Singazanelisa zonke izicelo zakho.
Unokukhetha umbala. Sibonelela ngezinto zekoton ngelaphu ngemibala eyahlukeneyo. Ngokwesiqhelo, Umbala wendalo uqhelekile. Nceda usixelele umbala owufunayo.
Singazenza iintlobo ezininzi zebhanti yomqhaphu welaphu. Ukuba uyilo, kungcono. Ukuba awunalo uyilo okanye umbono, ayinamsebenzi. Sinamava amaninzi okuvelisa iibhegi zomqhaphu welaphu kwaye sinokunika iingcebiso ezithile kuwe.
Iingxowa zomqhaphu / zelaphu
Iingxowa Non ephothiweyo
Iingxowa ezipholileyo zigqunyiwe
Ingxowa ye Satin
Iingxowa zetroli ezinamavili
Iingxowa zokuthambisa iingxowa zangasese
1. Q: Ngaba ngokwezifiso iingxowa zam?
A: Singazenza iibhegi ngokweemfuno zakho.
2. Q: Ngaba ndingaprinta ilogo yethu kwiimveliso zam.
A: Ewe, Singaprinta ilogo yakho kwiimveliso zakho. Kuphela sifuna ukuba ubonelele ngefayile yelogo yakho ngePDF okanye ngefomathi ye-AI.
3. Q: Yimalini imveliso?
A: Amaxabiso amiselwa zizinto ezininzi ezinje ngezixhobo, isimbo, ubungakanani, njl njl.
4. Q: Liliphi ixesha lokuvelisa?
A: iintsuku ezingama-15-25 eziqhelekileyo, kuxhomekeke kubungakanani. Nceda usixelele umhla owufunayo, sinokuzama konke okusemandleni ethu ukwanelisa wena.
5. Q: Ngaba kunokwenzeka ukuba ufumane isampuli ngaphambi kokubeka iodolo?
A: Ewe, ngokuqinisekileyo, kumgangatho kunye nokutshekishwa kwezinto, iisampulu zesitokhwe ngaphandle kokuprinta okwenziweyo kunokubonelelwa ngokukhululekileyo kwiakhawunti yakho yekhuriya. Siya kukuvuyela ukukuthumela iisampulu zasimahla.
6. Q: Kuthatha ixesha elingakanani ixesha lesampulu lemveliso?
A: 1 usuku iisampulu ezikhoyo. Iintsuku 3-5 iisampulu wena.
7. Q: Uhanjiswa njani umyalelo wam? Ngaba iingxowa zam ziza kufika ngexesha?
A: Ngolwandle, ngomoya, okanye ngabathwali bokubonisa (iUPS, iFedEx, i-TNT) ixesha lokuhamba lixhomekeke
8. Q: Yeyiphi imigaqo yentlawulo?
A: 30% T / T idipozithi, 70% eseleyo phambi kokuba unikezelo.
Idiphozithi engama-30% T / T, ibhalansi engama-70% xa ithelekiswa ne-BL.
I-100% kwangaphambili, i-L / C kumbono, i-Western Union / i-Paypal yentlawulo encinci.
9. Q: Ukufumana ikowuti, zeziphi ezinye iinkcukacha eziyimfuneko zokusixelela?
A: Izinto, ubungakanani, isitayile, umbala, iprofayile yelogo, ubungakanani belogo, amagama eprinta ilogo, ubungakanani, kunye nazo naziphi na ezinye iimfuno.
Egqithileyo Phinda usebenzise kwakhona ibhegi yokuthenga eneevenkile zomqhaphu kunye nomshicileli welogo yokuthengisa
Okulandelayo: I-OEM engenanto yenza i-logo yakho yokuthenga i-canvas tote bag
Sublimation Shicilela Eco Organic Natural Plain Ngaba ...
China Umthengisi ngelaphu tote bag yoshicilelo elwandle b ...
Kwenziwe ngentando kwakhona Linen yokuthenga Ilinen Cotton ...
Zokwazisa Custom Ilogo Ishicilelwe Eco-friendly El ...
Natural engenanto logo siko eshicilelweyo eco-friendly ...
White White engenanto Natural ngelaphu ngelaphu Shoppin ...